अब विदेशबाट फर्कनेलाई सरकारले लगायो यस्तो नयाँ नियम सबैले हेर्नुहोला – Media News Khabar
अब विदेशबाट फर्कनेलाई सरकारले लगायो यस्तो नयाँ नियम सबैले हेर्नुहोला
साऊन 21 काठमाडौं : सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सबै खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सबै उडान खुला गरे संगै अब नेपाल आउने नेपाली कामदारको चापलाई ध्यान दिएर सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ ।
सरकारले विदेशबाट फर्कने यात्रुलाई क्वारेन्टिन राख्न कुल ११० वटा होटेललाई अनुमति दिएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भैका २७ र बागमती प्रदेश उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएका ८३ गरि कुल ११० होटेल क्वारेन्टिनका रुपमा तोकिएको हो ।
विभागको होटेल शाखाले आइतबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा होटेलको सूची बुझाएको हो । नेपाल सरकारले जारी गरेको पछिल्लो विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश-२०७८ मा होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिएको छ ।यसअघि यो काम नेपाल पर्यटन बोर्डसमेतको सहभागितामा गरिएको थियो ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार हायात रिजेन्सी, द सोल्टी काठमाडौं, काठमाडौं मेरियट होटेल र र्‍याडिसन गरि चार वटा पाँचतारे होटेलले क्वारेन्टिनमा बस्ने यात्रु राख्ने छन् । गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोट, क्लव हिमालय (नगरकोट), समिट होटेल र एयरर्पोट होटेलसमेत यो सूचीमा छन् ।
पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटेलसम्म : विभागका अनुसार यसरी तोकिएका होटेलमा पाँचतारे होटेल र रिर्सोटदेखि पर्यटक स्तरीय होटेल समेत छन् । यसअघि ठमेल क्षेत्रमा घना बस्ती भएको भन्दै क्वारेन्टिन नबनाउने भनिएकोमा व्यवसायीको विरोधपछि ठमेल क्षेत्रका होटेललाई समेत सामेल गरिएको छ ।
सरकारले निश्चित गन्तब्य तोकेर हवाई यात्रा खुला गरेको छ । जसअनुसार विदेशमा खोप नलगाई आउने यात्रुले नेपालमा क्वारेन्टिन बस्नु पर्छ । खाडी मुलुकबाट आउने यात्रुले होटेल बुकिङ नगरेपनि नेपाल आउन दिइन्छ ।
तर, उनीहरु नेपाल आइसकेपछि भने तोकिएका होटेलमा आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट र्फकनेहरुले ५ दिनपछि पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिर्पोट आएमा घर-गन्तब्यमा जान पाउँछन् ।
Previous आजदेखि युएई खुल्यो, को को जान पाउँछन् ? के के छ मापदण्ड ? सम्पूर्ण जानकारी सहित
Next इरानका नवनियुक्त राष्ट्रपतिले कुर्सीमा बसेलगत्तै अमेरिकालाई दिए यस्तो क`डा चे`ता`व`नी, विश्वभर नयाँ त;रं`ग !